सांसदहरुको विकास मोह कि द्रव्य मोह ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘साँप्रामाथि पिँडालु’ अर्थात् थप बोझमाथि बोझ । नेपाली जनताले नेपाालको भूगोल तथा जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा सांसद संख्या धेरै भयो । यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ मात्र थपेको छ भन्ने गुनासो यदाकदा उठाइरहेका छन् अझै पनि । वास्तवमा छिमेकीलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकको क्षेत्रफल जनसंख्या र जनप्रतिनिधि संख्या केलाएर तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि नेपालमा सांसदहरुको संख्या धेरै पाइन्छ । नेपालमा नेताहरुले राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा पनि दलको अझ नेताको आवश्यकता हेरेर यति धेरै सांसद पद सिर्जना गरेका हुन् । धेरै पद भएपछि नेताहरुको व्यवस्थापनमा सजिलो हुने भएकोले राष्ट्रिय स्वार्थ पछाडि धकेलियो । धेरै सांसद भएपछि सांसदहरु पनि दलका आम्दानी पनि हुने भए । किनभने सांसदहरुको पार्टीले तलबबाट नियमित पैसा पाइरहने भयो निश्चित प्रतिशतमा । त्यो बाहेक अहिले त झन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुले विकासे व्यापार गर्न पनि पाएका छन् । यसैलाई साँप्रामाथि पिँडालु भन्ने उखान उचित भएको छ । एक त साँप्राहरुको बोझ त छदै छ । त्यो माथि पिँडालुको बोझ पनि थपिन पुगेको छ । यहाँ साँप्रमाथिको पिँडालु सावित हुने संसदीय विकास कोषबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपालका अधिकांश सांसदहरुले मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खान खोजिरहेका छन् । किनभने सानातिना विकासका काम गर्ने वडातहका कार्यलय त्यसमाथि गाउँ, नगर, महानगर कार्यलय छन् । अर्थात् सात सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो काम थाली सकेका छन् । यी सबै निकायहरु स्थानीय तहमा विकास गर्ने आधिकारिक विकास निर्माण गर्ने गराउने निकायहरु हुन् । यिनीहरुले गर्ने विकासको अलावा विकासका सानातिना योजना सञ्चालन गर्न सबै दलका सांसदहरुले सांसद विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विकास हाँक्ने भएका छन् । मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउने भनेको यही हो । नाकको काम सास फेर्ने हो भने मुखको काम खाने पिउने । सांदहरुले नाकको इज्जत जोगाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको काम त नियम कानुन बनाउने हो अनुगमन गर्ने हो । उनीहरुको मूल भूमिका भनेको विधायिकाको भूमिका नै हो । उनीहरुको क्षेत्रीय भूमिका नभएर राष्ट्रिय भूमिका नै हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना बाँकी छ । सांसदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकका बजेट जतिसक्दो छिटो निकासा गराउन जिद्धि गरिरहेका छन् सरकारसँग । मुलुकमा नीतिनियम ऐन कानुन बनाउने दायित्व बोकेका सांसदहरुले विकास योजना र रकम परिचालनको लागि गरेको मरिहत्ते लाजमर्दो छ । नेपाली उखान ....लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेको यही होला । सांसदहरुले मागेबमोजिम यो रकम सरकारले निकासा गर्ने हो भने तत्कालै राज्यलाई साढे अर्बभन्दा धेर अर्थात् छ अर्ब ६२ करोडको बोझ थपिन्छ । फेरि आर्थिक वर्ष दुई महिना मात्र बाँकी छ । यति छोटो अवधिमा यति धेरै रकम खर्च गर्न पनि सम्भव छैन बिल भर्पाई मिलाएर कागजे विकास गर्ने र अख्तियारमा धाउने हो भने त भिन्ने कुरो हो । यसले सांसदहरुको मर्यादा पनि बढाउँदैन र विवादमा पनि तान्छ ।
अहिले नै पनि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद पचास लाख पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दुई महिनामा नै यति धेरै रकम खर्च गर्न पाइने भएकोले पनि हुनसक्छ सांसदहरुको तीन नेत्र बलेका पनि होलान् । यसमा चाहिँ रष्ट्रिय सहमति भएको छ सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुमा । त्यसैले एकजुट भएर यो रकम निकासाको लागि सरकारलाई याने प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएको देखिन्छ । यो कार्यक्रम पहिलादेखि नै विवादस्पद बन्दै आएको छ । धेरै सांसदहरुले परिवारिक नातागोता राजनीति कार्यकर्ता आदि रहेका संस्थाहरुलाई यो रकम बाडेर विवादमा आएका पनि छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो कार्यक्रमको रकम अनियमित र दुरुपयोग भएको पनि विगतमा पनि औंलाएको छ । अझ यो छोटो अवधिमा यो रकमको सही सदुपयोग नहुने खतरा झन धेरै छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्को म्याद सकिएर निर्वाचनको घोषणा भएकोले निर्वाचन आचारसंहिता र अदालतको आदेशले यो रकम खर्च हुन पाएको थिएन । त्यसैले माननीय सांसदहरुको यो रकममा तीन नेत्र बलेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यदि इमानदार सांसदहरु थिए भने साँचो अर्थका विकासप्रेमी सांसद थिए भने विकास निर्माण संस्थागत किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ यो सबै काम स्थानीय निकायको हो भन्ने थिए । तर, यो रकम मेरै तजबिजमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्दैछन् । अझ अलिकति पनि असजिलो नमानी, लाज सरम संकोच नमानी दुई महिना मात्रै समय बाँकी छ । आर्थिक वर्षको विकास जे सुकै होस् रकमचाहिँ हात पारिहालौँ भन्ने मानसिकतालाई के भन्ने ? यसले आम जनतामा के सन्देश जान्छ ? सांसदहरु प्रति जनताको कस्तो धारणा बन्दो हो । माननीयज्यूहरुले यतातिर हेक्का राखेका छन् ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा जसरी हुन्छ विकासको पैसा लापरलुपर सकेर रकम गोजीमा हाल्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई विगतदेखि असारे विकास भनेर विगत आलोचना भएको र यस्ता प्रवृत्तिको माननीयहरुले सदनमा धेरैपल्ट बोलेका पनि छन् । आफैं त्यही प्रवृत्तिका भएपछि माननीयहरुले कुन नैतिकताले असारे विकासको विरोध गर्नु ? जो अगुवा उही बाटो भएन ?
समाचारमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यो कार्यक्रमका विपक्षमा छन् रे । एमालेका सांसदहरुले तत्काल यो रकम निकास गर्न प्रधानमन्त्रीकोमा प्रतिनिधिमण्डल गएको समाचारमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रमको विपक्षमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका मतलाई पनि ध्यान दिन सम्झाएको पनि खबर आएको छ । यो सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन नेता माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा दिएका पनि छन् । लाग्छ उनीहरु सांसद नै हुन् उनीहरुले पनि भोटमा दौडने कार्यकर्तालाई रिझाउन दिने मत देलान् । नदिए त सरकारै गिराइदिन्छौं बजेटै पास गर्दैनौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई तर्साउलान् नि । अनि त प्रधानमन्त्री पनि गल्नैप-यो । आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि सांसदहरुलाई नाकले पानी पिउने कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने सम्बन्धमा सहमत गराउन सफल पनि होलान् । अझ राम्रो त एमाले केन्द्रीय कमिटीले पार्टी गत निर्णय गरेर पनि व्यापक जनताले आलोचना गरेको कार्यक्रमलाई बन्द गराउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरोस् ।
अझ नराम्रो पक्ष त सांसदहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च नभएको रकम मात्रै मागेका छैनन् कि यो कार्यक्रममा पहिलाको भन्दा तीन डबलभन्दा बढी रकमको बढोत्तरी गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसमेत मागेका छन् । अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तीन करोडबाट बढाएर १० करोडको बनाउन उनीहरुको जोडदार माग छ । यदि सांसदहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर दस कारोड बनाइयो भने यस्ता रकमी खुद्रे आयोजनाको लागि मात्र राज्यलाई लगभग बीस अर्ब रुपैयाँको भार बढ्छ । जसको खास उपलब्धि पनि छैन । वार्षिक बीस अर्बको रकम पाँच वर्षमा त एक खर्ब बीस अर्ब हुन्छ । यति रकमले त राम्रो विद्युत् उत्पादन हुन्छ । के सांसदहरुको यतातिर ध्यान जान्छ कि विकासको आवरणमा तीन नेत्र बलिरहन्छन् ?
सांसदहरुको काम जनतालाई सानातिना खुद्रे योजना बाँड्दै हिंड्ने काम होइन भनेर त उनीहरुलाई दोह-याएर सम्झाउनै पर्दैन । यति सामान्य कुरा नबुझ्ने पनि सांसद भएको छैनन् । स्वाभाविक हो जनताका प्रतिनिधि भएपछि उनीहरुमा जनताका धेरै विकासका अपेक्षा हुन्छन् नै । विकास दिने पनि विधि छ प्रक्रिया छ र निकाय छ नि । उनीहरु व्यवस्थपकका रुपमा निर्वाचित भएका होइनन् । उनीहरु देश जनताको रक्षा गर्ने न्याय आय समृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा सुशासन आदिका लागि उपयुक्त ऐन कानुन बनाउँदै सरकारलाई घचघच्याउने हो । विधायिका र कार्यपालिकाको भूमिकालाई मिसमास पारेर गज्याङमज्याङ बनाउने काममा सांसदहरु लाग्नु भनेको उनीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ । कार्यपालिकाजन्य काम गर्नको लागि देशमा काम गर्न तीन तहका सरकारसहित प्रशासकीय संरचना छन् । सांसदहरु हो ! सहजीकरण र अनुगमन गर । वडा अध्यक्षको लोभ नगर मान्छे हाँस्छन् । माननीयज्यूहरु तपाईंहरुले बनाएको ऐन कानुन हामी मान्छौँ भनेर नै होला तपाईंहरुलाई हाम्रा माननीय भनेको होला । आफ्नो माननीयको मानलाई बिर्सेर तीन करोड र १० करोडको चक्करमा लाग्ने हो भने तपाईंहरुको माननीय खाननीयमा पतन हुन सक्छ र तपाईंहरुलाई जनताले खाननीय भन्न थाल्छन् । त्यसैले आफ्नो माननीयको मान जोगाउन खुद्रे विकासे चक्करबाट माननीय सांसदहरुलाई अलग्याउनुहोस् । यसैमा देश जनता र तपाईंहरुको समेत कल्याण छ । अनुचित जिद्दि नगर्नुहोस् ।